Nintendo သည်၎င်း၏မိုဘိုင်းဌာနခွဲ၏ဘဏ္resultsာရေးဆိုင်ရာရလဒ်များကိုတင်ပြသည် Androidsis
အမှန်မှာ၊ ဂျပန်ကုမ္ပဏီသည်မိုဘိုင်းဖုန်းဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်အကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်ခဲ့သည် Nintendo အတွက်ပစ်အတွက်ပေး၏ ပထမ ဦး ဆုံးတရားဝင်မာရီယိုဂိမ်း Android နှင့် iOS အတွက် အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါကုမ္ပဏီသည်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်တွင်မှတ်သားခဲ့သည်။
တကယ်တော့ဂျပန်ကုမ္ပဏီသည်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများတွင်အနာဂတ်ကိုမတွေ့မြင်ခဲ့သော်လည်းအခြေအနေများမှာပြောင်းလဲနေသည်။ ၎င်းမှာကျွန်ုပ်တို့မိုဘိုင်းဌာနခွဲသည်ရိတ်သိမ်းနေသည့်မယုံနိုင်ဖွယ်ရလဒ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းရောင်းချမှုနှင့်အတူ Nintendo သည် Sony ထက်၎င်း၏ဂိမ်းများဖြင့်ဝင်ငွေပိုရသည်!
Fire Emblem - သူရဲကောင်းများ၊ Android အတွက် Nintendo ၏ကြီးမားသောအောင်မြင်မှု
ကွဲပြားခြားနားသော desktop console များနှင့်၎င်းတို့၏ platform များ၏ဂိမ်းအမျိုးအစားများကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကဂျပန်ကုမ္ပဏီ၏မိုဘိုင်းဂိမ်းဌာနခွဲမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများသည်ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် တကယ်ကောင်းသောအမှုအရာလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, မာရီယိုကုမ္ပဏီ၏အရောင်းကိန်းဂဏန်းများ၏ရှေ့ပြေးမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် မီးအထိမ်းအမှတ်: သူရဲကောင်းများ။
Nintendo ယခု Mario Kart Tour အတွက်ပိတ်ထားသော Beta အတွက်လျှောက်လွှာများကိုလက်ခံသည်
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောအကြောင်းကိုပြောနေတာနေကြသည် မဟာဗျူဟာ၏ကြီးမားသောဆေးများနှင့်အတူ RPGမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် Nintendo ၏ကြီးထွားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သူအတွက်အလွန်ထူးခြားသည်။ ၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်၎င်းမှထုတ်ဝေသောကုမ္ပဏီ၏အမြတ်ပမာဏကိုအတိအကျကြည့်ကြပါစို့။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်မိုဘိုင်းဌာနမှကုမ္ပဏီသည်မည်သည့်ငွေတောင်းခံလွှာကိုမျှမပြုလုပ်သော်လည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ယူရို ၄၆ သန်းအထိရောက်ရှိနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ယူရို ၁၉၅ သန်းအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုအထွက်ကြည့်ပါ ပိုကီမွန် GO သည် Nintendo မှမဟုတ်ပါဒါကြောင့်ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကဒီ hit game ကနေမဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ယူရို ၃၁၅ သန်းအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုအမီး Emblem သူရဲကောင်းများ၏အောင်မြင်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှင့် 2018 ခုနှစ်တွင်? ကုမ္ပဏီသည်ယူရို ၃၆၉ သန်းအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ အချို့သောအမှန်တကယ်အပြုသဘောဆောင်သောကိန်းဂဏန်းများနှင့် Mario Kart ကိုမကြာမီစတင်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုများပြားလာလိမ့်မည်။
Nintendo နောက်ဆုံးတော့သူကအရာရာကိုတကယ်ကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်၊ ​​အကယ်လို့ဒီလိုဆက်လုပ်သွားရင် Android Android နဲ့ Tablet တွေပေါ်မှာဂိမ်းကစားရတာပျော်စရာကောင်းလာရင်အရေးအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Nintendo သည်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများတွင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုးတက်နေသည်။ ကုမ္ပဏီရဲ့အနာဂတ်လား။